UAlla Berger noAlexei Vorobiev: imbali yobudlelwane, iifoto ezinqabileyo
Iprojekti kunye no-Alexei Vorobyov iphela ngokukhawuleza, kwaye umbuzo othi ngubani oza kuphumelela umboniso "I-Bachelor 4" isaphila. Emva kwetyeli lesithathu, ababukeli abaninzi babeqinisekile ukuba lowo oyinqoba yeprojekthi nguAlla Berger.
U-Alla Berger kunye no-Alexei Vorobiev - ngesondo ngomhla wokuqala okanye ukuveliswa kobugcisa kwabavelisi?
Uluhlu lwesine luye lwaqinisekisa kuphela ukucinga kwebalandeli be-reality show: U-Alla Berger wayenomdla kakhulu ku-Alexei Vorobyov ukuba udokotela onqabileyo wayengenakuyithintela inzondo yakhe. Kwi-city blocking uAlexei wamanga ngothando uAna. Lo kwakuyena yokuqala yokubanga kwiprojekthi "iSigcino 4".
Ukuhamba ngomhla ngamnye, isibini sivakatye kuphela ukuhamba ngothando ebusuku, kodwa sajonga kwakhona kwi-salon yokudweba ubugcisa. Ukuqala ngemidwebo kwimibutho yomnye nomnye, uAlla noAlex babengenakuyeka ... Ukuqabana kwangoko kwanyuka kwintlangano.
Kwakubonakala ukuba intlanganiso yokuqala phakathi kukaAlla Berger no-Alexei Vorobiev yayiya kugqiba ngesondo, kodwa umculi wafumana amandla okuyeka ngomzuzu wokugqibela.
Kamva u-Alexey wathetha ngesigqibo sakhe:
Ndimele ndihlale ndicinga kakuhle kwaye ndihlolisise imeko. Le nto ayikho imeko apho sivuka khona kusasa, uyamamatheka kwaye sihamba kunye ukuze silungiselele kwasekuseni ... Ndathi: "Abafana, senzekile, ndiyifumene ...", ukuba ndiqinisekile ukuba kube sekupheleni, kuya kwenzeka.
U-Alla Berger uyavuya ngokumanga kukaAlexei Vorobyov
Amantombazana asele projekthi "I-Bachelor 4", i-priori ayingabangani, kuba bonke bayalwela indoda enye. Ngelo xesha, yonke intombazana izama ukubonisa abanye ukuba u-Alexey Vorobyev ulingani ngokuchasene nemvelaphi yakhe. Phakathi kwabo, abathathi-nxaxheba beprojekthi baxubusha ngokukhawuleza yonke isidima "se-bachelor".
Emva kokubuya emva komhla oshisayo kunye neVorobyov, u-Alla akazange akwazi "ukumbamba" abathandanayo bakhe:
Amantombazana, umntu wabuza, njani i-Vorobyov kiss? Ndiza kuthetha ukuba lihle kakhulu ...
Ngaloo ndlela, ekupheleni komcimbi wesine, ubuhle obuncinane bebucacisile kubo bonke abathathi-nxaxheba ukuba ukususela ngoku, u-Alla Berger kunye no-Alexei Vorobyov kunye kule projekthi.
Ngubani u-Alla Berger: i-biography, iindlebe, iifoto ezinqabileyo
U-Alla Berger udumisa esuka eTver. Intombazana yajika ngo-21 ngoJanuwari. U-Alla uphila kunye nogogo wakhe: kwinqaku elithoba le-"Bachelor" watshela uAlexis ukuba wayebuhlungu njani xa umama wakhe wamshiya ebuntwaneni bakhe.
Ngoku u-Alla uhlala eMoscow, apho esebenza njengomzekelo, ethatha imifanekiso kwiiseshoni zeefoto ezingenanto. Ngomdla wakhe wokudubula ngesitayela "sokungaboni" UAlla watshela uAlexei ngosuku lokuqala lobazana naye, wamtyhola ngokunyaniseka.
U-Alla Berger uqhuba rhoqo i-instagram, equle iifoto ezithandanayo zohlobo.
Isigqibo sokwenza "imifanekiso engabonakaliyo" uAlla wathatha ngenxa yeengxaki zabo - intombazana ayizange ibone ukuba iyintombazana kwaye iyintle. Ukuphakamisa ukuzithemba u-Alle Berger wanceda isithombe esinobucayi.
Xa umzekelo wathola udumo ngenxa yokuthatha inxaxheba kwi-"Bachelor" kwixesha le-4, kwi-intanethi kwakukho amahemuhemu ukuba u-Alla Berger iminyaka emininzi edlulileyo ethatha inxaxheba njengomzekelo ongenasiphelo, esasaza iziphuzo kwenye yeziganeko zokubonisa i-"Na-Na". Njengobungqina, kukho isithombe apho umvelisi weqela elithandwayo elihlamba i-breast-naked naked brunette. Abanye abasebenzisi bayaqiniseka ukuba lo ngu-Alla Berger noBar Alibasov.
Enyanisweni, akunakwenzeka ukuthetha ngokuzithemba ukuba umfanekiso ubonisa uAlla, awukwazi - ubuso bentombazana abukwazi kubonwa.
Ngaba uAlla Berger noAlexei Vorobyov baya kuhlanganisana emva kokuphela kweprojekthi "iSigcino 4"?
Kungakhathaliseki ukuba abaphulaphuli bazama njani ukufumana igama lomntu ophumelela "u-Bachelor" umboniso weTV kwixesha lesine, kuya kukhangela ukufumana kuphela kuphela ixesha lokuphela kwexesha le-Alexei Vorobyov.
Okwangoku, umculi sele sele enexesha lokucebisa abalandeli bakhe. Ngoko, ngo-Epreli 1 uAlexey Vorobiev kwi-instagram wabeka i-video yokurekhoda apho wathi wakhethayo wayekhulelwe, kwaye wayeza kutshata naye, engalindelanga ukuphela kweprojekthi. Ekubeni ngelo xesha ekuboniseni kwakhe waqala udaba kunye no-Alla, abaphulaphuli bathetha ngokukhawuleza: U-Alla Berger ukhulelwe.
Nangona kunjalo, njengoko abasebenzisi bezonxibelelwano zentlalo abazange bazame ukuqwalasela isisu se-Alla kwisithombe kwi-Instagram yakhe, akukho nto eyenzekayo-into yeBergger ayitshintsanga okwamanje.
Kodwa abasebenzisi be-intanethi abakujongayo bayimjonga ngendandatho yomnwe ngomlenze. Ngaba u-Alla Berger no-Alexei Vorobyov bahlangene ngoku? Imodeli yefashini ayichazi malunga nobudlelwane bayo no-Alexei Vorobyov ngezizathu eziyaziwayo, ngoko abalandeli bakhe baphetha ngelithi isandi sesipho.
Ngethuba elidlulileyo kwiwebhu kwakukho isithombe apho uAlla Berger noAlexei Vorobiev bahamba behamba ngesitalato. Umfanekiso uthathwe emva kokuphela kweprojekthi. Abafaki baqinisekisa ukuba ifoto ibhalele uhambo oluhlangeneyo ukuya eBernger yaseTver.
Kwiintsuku ezimbalwa ezedlule, u-Alla Berger kwi-Instagram wanyathelisa isithombe esivela kwi-salon yomtshato.
Ababukeli balo mboniso babecinga ukuba umphumeleli wokugqibela we-show "UCachelor 4" uya kuba nguAlla Berger, kodwa ukufumanisa ukuba umtshato uya kubanjwa, unokulinda kuphela ukuphela kwesiprojekthi esithandwayo.
U-Hillary Clinton - i-biography, ubomi bomntu, amaqiniso angaziwa, ingxelo malunga neRashiya kunye noPutin
I-choreographer Tatyana Denisova - biography kunye nezithombe ngaphambi nangemva kweeplastiki
Ubomi kunye nobomi bomntu ongumdlali we-actress Ekaterina Kuznetsova
Ubomi bomntu siqu ka-Ivan Urgant: abafazi, iintombi kunye nabantwana
Kunzima ukukholelwa ukuba lo mntu munye: Isithombe sikaVictoria Lopyreva ngaphambi nangemva kweeplastiki kunye nokubuyisela kwakhona
Ikhukhi kunye nebhekoni kunye noshizi
Iyintoni indawo yokudlala yabantwana?
I-Technique ye-massage head
I-anemia yisifo esingahambi sisodwa
Risotto bianco nge pesto sauce
Indlela yokufumana umntu embhedeni
Uluhlu olulandelayo lukaKarl Lagerfeld eParis
Iimpawu zokusebenza kunye nokusebenzisana kwesigxina sekhohlo kunye nesokunene sobuchopho
UPaulina Andreeva: ubomi bomntu kunye nobuchule
Ngaba kufanelekile ukubuyela kubuhlobo bokuqala?
Yikuphi ukutya okungeke kudibene ekudleni?
Khachapuri kwi-pastry e-puff kunye noshizi